Gabadh 10 jir lagu kufsaday oo dhashay - BBC News Somali
Gabadh 10 jir lagu kufsaday oo dhashay
Image caption Hindiya waxaa caan ka ah carruurta la kufsado, in kabadan toban kun ayaana la kufsaday sannadkii 2015kii
Gabadh 10 jir ah oo la kufsaday, maxkamadda ugu saraysa Hindiyana ay u diiday in ay iska soo xaaqdo uurka ayaa dhashay gabadh iyadoo lagu qalay.
Gabadha ayaan ka warhaynin in ay dhashay. Markii ay uurka lahaydna waxaa loo sheegay in waxa caloosheeda ka kuusan uu yahay dhagax wayn.
Canugta ayaa ku dhalatay isbitaal ku yaalla magaalada Chandigarh ee dalka Hindiya iyada oo culayskeedu yahay 2.5kg, balse hooyadeed lagu qalay.
Gabadha iyo hooyadeedba way caafimaad qabaan sida ay saraakiil u sheegeen BBC.
Adeerkeed ayaa lagu eedeeyay in uu marar badan kufsaday gabadha toddobadii billood ee la soo dhaafay, xabsiga ayaana la dhigay.
In ay uur tahay ayaa la ogaaday bartamihii Luulyo, ka dib markii ay ka cabatay in caloosha laga hayo, markaas ayayna waalidkeed geeyeen isbitaal.
Maxkamad hoose oo ku taalla magaalada Chandigarh ayaa diiday in ilmaha la soo xaago ka dib markii guddi dhakhaatiir ah isku raaceen in ay aad halis u tahay arrintaasi, markii dambana maxkamadda sare ayaa go'aankaas oo kale qaadatay iyo sababo kuwaas oo kale ah.
Gabadha dhalatay 'oo laga yaabo in lagu wareejiyo cid korsata'
Maadaama oo canugta yar ay dhalatay iyadoo aan shinkeedii buuxsamin, waxaa la galiyay qalab lagu xannaaneeyo oo isbitaalku leeyahay, halkaas oo ay ku sii jiri doonto maalmaha soo socda, sida ay ku soo warramayso weriyaha BBC Geeta Pandey oo ku sugan magaalada Delhi.
Waalidiinta gabadhan toban jirka ah oo markii u horraysayba sheegay in aysan rabin canugga uurka ku jira ayaan xataa fiirinin sida uu eg yahay canuga yari, ayuu ku sii daray wariyahannagu.
Ilmaha hadda waxaa baxnaanin doona guddi carruurta xannaaneeya tan iyo in xal kale looga helayo.
Hooyada toban jirka ah ayaa la filayaa in ay isbitaalka ku sii jirto todobaad ilaa toban maalmood.
Toddobaadyadii u dambeeyay warkan ayaa qabsaday ciwaannada warbaahinta dalka Hindiya, saraakiishuna waxay sheegayaan in ay tahay gabadhii ugu da' yarayd ee wax dhasha abid.
Sharciga dalka Hindiya ma ogola in ilmaha la iska soo xaaqo marka uu 20 todobaad dhaafo, haddii aysan dhakhaatiirtu caddaynin in nolosha hooyadu ay halis ku jirto.
Haweenay maxkamad loo soo taagay in ay nin kufsatay
Gabadh xubinka taranka ka jartay nin kufsaday
Hindiya oo musaafurineysa qaxootiga Rohingya
Laakiin sannadihii u dambeeyay maxkamadaha waxaa soo gaarayay dacwado racfaan lagaga qaadanayo go'aankaas, si la isaga soo xaaqo uur 20 bilood ka badan jira, sababtuna waxay tahay in carruurta qaarkood aysan is ogaan karin in ay uur qaadeen.
Qolyaha xuquuqda carruurta u dhaqdhaqaaqa oo si joogta ah ula kalmi jiray hooyadan toban jirka ah ayaa sheegay in ay sidaas tahay waxa ku dhacay gabadhan yar.
Baaxadda ay leedahay tacaddiga Hindiya ka dhaca
Ilmo 16 sano ka yar ayaa 155 daqiiqo ee kaste la kufsadaa, 13kii saac ee kastana ilmo 10 sano ka yar
In kabadan oo carruur ah ayaa la kufsaday sannadkii 2015kii.
240 oo milyan oo gabdhood oo ku nool dalka Hindiya ayaa la guursaday iyaga oon gaarin 18 sano
53.22% carruurta dhigatay iskuullada dawladda ay waxay sheegeen in lagula ka cay noocyo ka mid ah tacaddiyada
50% dadka tacadiyada gaystay waa qof ay carruurta is yaqaannaan ama waa kuwa xannaaneeya.
Xigashada macluumaadkan: Dawladda Hindiya iyo Unicef